Sawirro: Tobanaan Qof Oo Ku Dhintay Shil Tareen oo Ka Dhacay Wadanka Masar.
Saturday August 12, 2017 - 17:46:45 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay shil tareen oo ka dhacay waqooyiga wadanka Masar waxaana socda olole loogu gurmanayo dadkii ku dhaawacmay shilkaasi.
Wararka ka imaanaya waqooyiga wadanka Masar ayaa sheegaya in ugu yaraan 49 qof rakaab ah ay ku dhinteen 179 kalane ay dhaawacmeen kadib markii laba Tareen isku dhaceen.
Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in dadka dhaawacmay 12 qof oo kamid ah ay xaaladooda caafimaad aad uliidato wuxuuna ka digay in dhimashadu ay sii badan karto haddii aan degdeg dhaawacyada loogasoo saaray burburka hoostiisa.
Saraakiisha Booliska Masar waxay sheegeen in tareenadu markii ay is hertinayeen ay ku socdeen xawaare sare taasi oo sare u qaadday khasaaraha dhimasho iyo dhaawac, tareenada isku dhacay ayaa ahaa kuwa gaboobay oo 40 sanadood ka hor lafarsameeyay sida uu sheegay madaxa guddiga tareenleyda.
Labada Tareenada isku dhacay ayaa kusii jeeday magaalooyinka Al-Qaahira iyo Alaskandariyah, sawirro lagu baahiyay baraha Internetka ayaa muujinayay burburka ka dhashay shilkan tareen oo kamid noqonaya shilalkii ugu xanuunka badnaa ee wadanka masar ka dhaca.
Sawirro: Horumar Laga Dareemayo Suuqyada Xoolaha Gobollada Bay iyo Bakool.